PJ မျက်နှာဖုံး: တစ်ဦးကသူရဲကောင်း Be ရန်အချိန် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PJ မျက်နှာဖုံး: တစ်ဦးကသူရဲကောင်း Be ရန်အချိန်
PJ မျက်နှာဖုံး: တစ်ဦးကသူရဲကောင်း APK ကို Be ရန်အချိန်
PJ မျက်နှာဖုံးသငျသညျလိုအပျ! ဒါဟာသူရဲကောင်းဖြစ်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး PJ မျက်နှာဖုံးဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဖွင့်ကိုက်ညီဖို့အချိန်ပါပဲ။ သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်မျက်နှာဖုံးကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Catboy, Owlette သို့မဟုတ် Gekko အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့။ ဂိမ်း Play နှင့်မြို့တဝိုက်ချောင်ပါစေပြီသူလူကြမ်းအဖြစ်, Romeo, Luna မိန်းကလေး, ည Ninja နှင့် Ninjalinos, ဖမ်းဆီးဖို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။
•တစ်ခုတိုးပွားအဖြစ်မှန်ဂိမ်း Unlock နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဇာတ်ကောင်ကိုကြည့်ပါ။
• Catboy, Owlette နှင့် Gekko ထံမှရွေးချယ်ရာတွင်တစ် PJ မျက်နှာဖုံးဇာတ်ကောင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပါ။
•အ PJ မျက်နှာဖုံးများအတွက်အပိုဆောင်းဇာတ်ကောင်မျက်နှာဖုံးများ Unlock နှင့် Romeo, Luna မိန်းကလေးနှင့် Night Ninja အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါ။
•အရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်နှင့် PJ မျက်နှာဖုံးဌာနချုပ်မှာ Play ။
• 15 mini ကိုဂိမ်းစုစုပေါင်း။
3 အသစ်များကို mini ကိုဂိမ်းအပါအဝင် 27x ဂိမ်းအသစ်များဝယ်ယူရန်• Option ကို
• Catboy, Gekko နှင့် Owlette အသစ်တိုးမြှင်မျက်နှာဖုံးများနှင့်ဆက်ဆံစေခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကောင်များအတွက်ပျော်စရာအထူးသက်ရောက်မှုကိုကြည့်ပါ။
မိဘလမ်းညွှန်မှုကင်မရာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်း၏ကနဦး Set-up နှင့်အတူကူညီပေးဖို့အကြံပြုသည်။
SAFE နှင့် AD-အခမဲ့
အဆိုပါ PJ မျက်နှာဖုံး, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမိသားစုများသန်းပေါင်းများစွာတို့ကအသိမှတ်ပြု: တစ်သူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အချိန်နှင့်အတူစိတ်မိဘများငြိမ်းချမ်းရေးပေးသည်:
တစ်ဦးကဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်•: NO ကြော်ငြာတွေ!
• COPPA နှင့် kidSAFE အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်
PJ မျက်နှာဖုံးအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိသားစုများနှင့်အတူတစ်ဦးကြီးတွေအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သူရဲကောင်းများ၏အတူတကွသုံး - Catboy, Owlette နှင့် Gekko - နက်နဲသောအရာဖြေရှင်းရေးနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်အဖိုးတန်သင်ခန်းစာများသင်ယူ, action ကို-ထုပ်ပိုး Adventures အပေါ်စတင်။ ညအချိန် baddies ထွက် Watch - ထို PJ မျက်နှာဖုံးသူတို့၏လမ်းအပေါ်ဖြစ်ကြသည်နေ့ကိုကယ်ဖို့ညဉ့်သို့!
Entertainment က One (eOne) စျေးကွက်ဖန်တီးမှုအတွက်ခေါင်းဆောင်, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိသားစုများနှင့်အတူဆက်သွယ်ဆုရကလေးတွေ '' အကြောင်းအရာစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖှယျ Peppa ဝက်ကနေ PJ မျက်နှာဖုံးရန်, ကမ္ဘာ့အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူပြုံးပြတယ်, eOne ဖန်သားပြင်ထဲကနေစတိုးဆိုင်များမှလမ်းအပေါင်းတို့ပြောင်းလဲနေသောအမှတ်တံဆိပ်ကြာပါသည်။
• Android ထုတ်ကုန်များအတွက် OS ဗားရှင်း 6.0 နှင့် 7.1 + အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အကြံပြုသည်။
•အမေဇုံမီးသတ်ထုတ်ကုန်များအတွက်သာအမေဇုံ Fire HD ကို 5th ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်။
• ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဒီ app ကိုအချို့သောအဟောင်းများကို Android Device များနှင့်သဟဇာတမဖြစ်
More Information ကို: http://pjmasks.co.uk/grown-ups/apps/general-app-support
ကျနော်တို့က ပို. ပင်ကြောက်မက်ဘွယ်အောင်ဒီ app ကိုမှ updates များကိုစာရေးအောင်အလုပ်များနေခဲ့တော့!
•အ kidSAFE အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Added ။
• Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်တည်ငြိမ်ရေးတိုးတက်မှု
PJ မျက်နှာဖုံး: တစ်ဦးကသူရဲကောင်း Be ရန်အချိန်
103.74 ကို MB
PJ မျက်နှာဖုံး: ...
LEGO® Junior ...